Fanjifana bateria be loatra? Fanazavana sy vahaolana. | Androidsis
Fanjifana bateria be loatra? Fanazavana sy vahaolana.
Zack | | bateria, Finday, About us
At our Forum, olona maro no nanoratra nitaraina sy nanontany ny antony misy fotoana "mivaingana" ny baterin'ny smartphone-nao, afaka minitra vitsy dia lany nefa tsy manodina ny efijery akory.
Amin'ity lahatsoratra anio ity dia hanome anao fanazavana ny iray amin'ireo mety ho antony (ny tena matetika) ary ny vahaolana amin'ny olan'ny fihinanana bateria tampoka. Raha fintinina, ny tena tompon'antoka amin'ity fantsom-batana saika eo noho eo ity dia ny hadisoan'ny CPU.
Ny fanjifana CPU be dia miteraka fihinanana bateria avo lenta, ankoatry ny telefaona mahamay be. Raha ny mahazatra dia tsy tokony ho eo amin'ny fampisehoana feno ny processeur raha tsy manamboatra rindranasa izay mitaky izany izy, toy ny lalao ohatra.
fa misy fotoana ny fampiharana izay mijanona ao aoriana, na noho ny bug izay ananan'ny fampiharana na izay tsy nikatona tsara, ary mahatonga ny processeur hiasa amin'ny 100%.
Azonao atao ny mahatsikaritra izany rehefa manana finday sahirana amin'ny asa ianao ary mahamay be.
Mba hijerena an'ity olana ity dia atoroiko (hizaha toetra ny tenako) ny fampiharana CPUSpy.
Ity fampiharana ity dia hampiseho amintsika ny fotoana naharetan'ilay CPU tamin'ny hafainganam-pandeha sasany (MHz).
Ka raha hitantsika fa mandany fotoana be dia be amin'ny fomba hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny hafainganana hafa ny processeur, dia satria misy zavatra hafahafa mahatonga ny CPU hiasa be loatra.
Raha manamarina izany ianao tSmartphone ianao mitranga izany Safidy roa no atolotray:
- Tadiavo ireo rindranasa farany napetrakao ary esory izy ireo tsikelikely mandra-piverin'ny finday sy ny fanjifana batterie ho normal.
- Fero ny hafainganan'ny CPU. Ho an'ity dia mila manana fahazoan-dàlana Root sy fampiharana izay mametra ny fahombiazan'ny CPU ianao, ohatra SetCPU.
Fanamarihana: Raha manana ny kinova 2.3.3 ianao ary izao no nanjo anao dia zahao ny fampiasana bateria raha ilay voalohany (ilay mandany be indrindra) no OS, satria ity kinova Android ity dia manana bibikely izay mahatonga ny OS mitelina Batterie. Nitranga tamiko izany, nanavao ny kinova 2.3.4 aho ary voavaha ny olana, ary nampitombo ny androm-piainany aza :-)
SetCPU ho an'ny mpampiasa Root
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » bateria » Fanjifana bateria be loatra? Fanazavana sy vahaolana.
Dieselmpm dia hoy izy:
Izany rehetra izany dia tsy mitranga amin'ny iOS
Valiny amin'ny Dieselmpm
Erconesis dia hoy izy:
Manana iOS 5.0.1 aho ary mamono bateria toy ny vampira !!
Mamaly an'i Erconesis
Frasquitoelloco dia hoy izy:
Ary amin'ny Windows XP? Ary ahoana ny amin'ny BeOS?… Forum Android ity… iza no miraharaha?
Valiny tamin'i Frasquitoelloco
Xavi87 dia hoy izy:
Endrey ny hatsaranao raha hangina ianao
Mamaly an'i Xavi87
Eny tsara tarehy. Andao hiaraka amin'i Dada.
BLA bla dia hoy izy:
Matetika aho mampiasa "OS monitor" hijerena ny fanjifana CPU. Andro hafa dia nesoriko ny ekipaitao noho io antony io. Ny fihainoana mozika dia zara raha mampiasa CPU, saingy miaraka amin'ny Equaliser dia CPU 50% no teo ary kely kokoa ny bateria, zavatra tsy azo ekena raha ny fijeriko azy.
Equalizer voafafa ipso facto, ary tena faly mampiasa OS monitor.
Valiny tamin'i Blabla
Cesar Gomez Solis dia hoy izy:
Manana ny vahaolana tsara indrindra aho, antenaiko fa mahasoa anao io.
Avelao hisokatra fotsiny ny fampiharana ny famantaranandro sandwich gilasy, tonga toy ny tsy misy izy io, isaky ny mametraka ny findainao ianao mba hamaha ny fisokafanao ary avy eo apetrakao ny hidin-telefaona finday, dia ho hitanao ny fihenan'ny fihinanana bateria , 100% azo antoka ary tsotra. Manantena aho fa mety aminao izany, raha manana fisalasalana ianao dia lazao amiko ary hazavaiko amin'ny antsipiriany kokoa izy ireo
Valiny tamin'i Cesar Gomez Solis
antsipiriany bebe kokoa azafady
LG dia manolotra vahaolana vaovao amin'ny famahanana tsy misy tariby ny findainy finday avo lenta